ချစ်ကြည်အေး: Trophy Collector
"ခုတလော ခင်ဗျားကြည့်ရတာ လန်းနေသလိုပဲဗျ"
"အင်း ကျွန်မကို ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တယ်ထင်တာပဲ"
"ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး၊ တခုခုကို ရောက်သွားတာ၊ အဆုံးကိုလို့ ထင်တာပဲ"
"အဲဒီအဆုံးက ခင်ဗျားသဘောကျတဲ့အဆုံး ဟုတ်ရဲ့လား"
"သဘောကျခြင်း မကျခြင်းတွေ ကျွန်မ သိပ်စဉ်းစားလေ့ မရှိတော့ဘူး
အပြင်ဘက်က သစ်ပင်စိမ်းတွေဆီ တချက်လှမ်းငေးရင်း ခပ်လေးလေးဖြေမိသည်။ တကယ်တော့ သစ်ပင်ပေါ်က အရွက်စိမ်းတွေက တကယ့်အစိမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဖုန်တက်နေတဲ့အစိမ်းတွေ၊ မိုးရွာလိုက်ရင် ကောင်းမှာပဲ။
သူက ကားကို ဂရုစိုက်မောင်းရင်း ရှေ့ကြည့်နေလျက်က ခေါင်းတညိတ်ညိတ်။
သူမက အပြင်ကို ငေးလျက်က တွေးတွေးဆဆ ပြောပြန်သည်။
"ကျွန်မလည်း သိပ်တော့ မသိဘူး
ဘဝကြီးက မသိခြင်းတွေပြည့်နှက်နေတာဆိုတော့ ကျွန်မလည်း မသိခြင်းတွေဆီ ရောက်ရောက်သွားတာ များတယ်
သူက ကျွန်မ နှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ ယောကျာ်းပုံစံတော့ မဟုတ်ဘူး"
"He is not my cup of tea ဆိုတာ ခင်ဗျား ပြောဖူးတယ် ဒါပေမယ့်"
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မ ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အဲတာကို ကျွန်မ သံသယရှိနေတာ"
"အချစ်နဲ့ စွဲလန်းခြင်းဟာ မတူဘူးလေ၊ ခင်ဗျား အခု နားလည်သွားပြီပေါ့"
"ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မပြောချင်တာ အဲတာ
တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ အချစ်လို့ထင်ခဲ့မိတာကို ကျွန်မ နှမျောနေတာ
အချိန်တွေအကြာကြီး သေချာတယ်ထင်ခဲ့တာလေ၊ တသက်မှာ လူတယောက်ကိုတော့ ချစ်ခဲ့ဖူးပြီ ထင်ခဲ့တာ"
"ခင်ဗျားကို သေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ ခင်ဗျားစိတ်ကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး သူလိုချင်တဲ့ဆီ ရောက်အောင်သွားခဲ့တာမျိုး."
"ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မပြောချင်တာ အဲတာမျိုးလား မသိဘူး"
"ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ခင်ဗျားဘဝထဲ သူမရှိရင် မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အထိ ခံစားခဲ့ရအောင် ခင်ဗျားစိတ်ထဲ အနက်ကြီး ချိန်ပစ်ထည့်ခဲ့တာ"
သူမစိတ်တွေ ဝေဝါးသွားခဲ့ပြန်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း သူမဒဏ်ရာနက်ခဲ့တာ။
မီးပွိုင့်မှာ ကားရပ်ခိုက် ဘေးကကားတွေကို သူမငေးမိပြန်သည်။ ဘာကားအမျိုးအစားပါလိမ့်၊ ကားအမျိုးအစားတွေ၊ တံဆိပ်တွေ၊ နာမည်ကြီးတွေကို သူမ မသိပါ။
"ယောကျာ်းတွေက မိန်းမတွေထက် ဂုဏ်တွေ ပါဝါတွေ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ပိုကြည့်တတ်တယ်နော်"
"ကျွန်မဘဝမှာလေ တခါမှ အမြင့်ကိုရောက်ချင်စိတ်နဲ့ မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး"
"ခင်ဗျား နောင်တနဲ့ နာကျင်နေတာမျိုးတွေ ခံစားရတုန်းလား"
"အင်းဒါပေမယ့် ရှင်သိလား၊ ကျွန်မမာနကြောင့် နာကျင်နေရတာ
တခြားမိန်းကလေးတွေလို ဟန်မဆောင်တတ်ခဲ့ဘူး၊ ကျွန်မဟာ ရဖို့ခက်တယ်ဆိုတာမျိုး ကျွန်မ နေမပြခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ သူ
ထွက်သွားတဲ့အခါ သူ့နောက်က ပြေးလိုက်နေခဲ့မိတယ်၊ တခြားမိန်းကလေးတွေလို ကိုယ့်လမ်းကို ပျော်အောင် တယောက်ထဲ ဆက်လျှောက် မပြမိခဲ့ဘူး၊ နောင်တလို့ နာမည်တပ်ရမလား မသိဘူး။ အဲတာတွေအတွက် ကျွန်မ နာကျင်နေရတာ"
"အဲတာ ခင်ဗျားက ရိုးသားတာကိုး၊ ခင်ဗျားလို အမျိုးသမီးမျိုး သူထပ်တွေ့မယ် ထင်နေလို့လား"
"မထင်ပါဘူး၊ တခြားမိန်းကလေးတွေက မာနရှိတယ်။ ကျွန်မက မာနမရှိခဲ့တာ"
"ရော်ခက်ပြီ၊ သူတွေ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးလိုမျိုးတွေက အများကြီးပါဗျ။ ခုခေတ်မှာ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်စိတ်ကို အနာခံပြီး၊ ကိုယ့်မာနကို ချပြီး လူတယောက်ကို ဘယ်သူကမှ မချစ်တော့ဘူးဗျ.။ ခင်ဗျားလို sincere သိပ်ဖြစ်လွန်းတဲ့အမျိုးသမီး ရှားတယ်လေ"
"ရှားတော့ ဘာဖြစ်လဲ၊ ကျွန်မ တန်ဘိုးအထားမခံခဲ့ရဘူးလေ။ ကျွန်မနာကျင်ရတာ အဲတာကြောင့်လည်းပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ရရင် လူတိုင်း တန်ဘိုးမထားတတ်ကြဘူးတဲ့၊ အဲလို သူပြောခဲ့တာ"
မဟုတ်တာ၊ လူတိုင်းဆိုတာတော့ မမှန်ဘူးဗျ။ လွယ်တာခက်တာအပေါ် တန်ဘိုးထားမှုဆိုတာတွေက လူတဦးချင်းစီနဲ့သာ ဆိုင်တာတွေပါဗျာ။ ခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲလောက် မနှိပ်စက်သင့်ဘူး"
"တခါတေလေတာ့ သူ ကျွန်မကို သံယောဇဉ်များ ရှိသေးလား ထင်မိပြန်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးတွေမှာ ကျွန်မ သိပ်ငိုချင်တာပဲ"
"ကျွန်တော်ပြောမယ်။ အဲ့လူဟာ Trophy collector လုို လူမျိုးပဲ။ သူ့ဝါသနာအရ Trophyတွေကို လိုက်စုဆောင်းမယ်၊ ရလာသမျှ ဘီရိုထဲ ထည့်သိမ်းထားမယ်။ ဒါဟာ သူ့အောင်မြင်မှု၊ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲ။ ဒါတွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်မိတိုင်း သူ့မှာ energyအသစ်တွေရနေမယ်၊ ဒီလောက်ပဲ။
ရပြီးတဲ့ Trophyတွေကို ဘီရိုထဲပစ်ထားပြီး မရသေးတဲ့ Trophyအသစ်တွေကို စိတ်ဝင်တစား လိုက်စုဆောင်းမယ်။ တခါတလေတော့လည်း ရပြီးသွားတဲ့ Trophyတွေ ဖုန်တက်တဲ့အခါ ဘီရိုထဲကထုတ်၊ ဖုန်လေးဘာလေးပြန်သုတ်ရင်း အဲ့ Trophyနဲ့ ဆက်စပ်ခဲ့သမျှမှတ်ဉာဏ်တွေကို ပြန်စဉ်းစားချင် စဉ်းစားလိမ့်မယ်။ အဲတာကလည်း သူ့သာယာမှုအတွက်ပဲဗျ။ ရပြီးသားTrophyအဟောင်းတခုအပေါ်မှာ သူ့စိတ်ဝင်စားမှုက အဲသလောက်ပဲ၊ အဲတာကို သံယောဇဉ်လို့ ခင်ဗျား ဘာသာပြန် မလွဲမိစေနဲ့"
"ယောကျာ်းတွေ ရှင့်လို စိတ်ထားရှိရင် ကောင်းမှာ"
"အမျိုးသမီးတွေလည်း ခင်ဗျားလိုဆိုရင် ကောင်းမှာ"
သူမတို့နှစ်ယောက်လုံး သေဘာတက် ရယ်မိကြရသည်။ ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ခဏတော့ ပေါ့ပါးသွားသလို.။
"ဆေးတွေလည်း မှန်မှန်သောက်ဖို့ မမေ့နဲ့ဗျ နော်၊ နောက်လ ဆေးခန်းရက်ချိန်းမှာ ပြန်တွေ့တာပေါ့ဗျာ၊ ဒီကြားထဲ ခင်ဗျားစိတ်ထဲ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ်တခုခု ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်ဖို့ အားမနာပါနဲ့"
သူ့ကားထဲမှ မထွက်ခင် ဒက်ရ်ှဘုတ်ပေါ်ရှိ သူ့လိပ်စာကဒ်က သူမမျက်လုံးထဲ ဖျတ်ကနဲ ဝင်ရောက်နေရာယူလေသည်။ အဲတာမျိုးတကတ် သူမပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ရှိနေတာကိုပါ တဆက်ထဲသတိရကာ ပြုံးမိသေးသည်။
* Your well-being is our Happiness *
George Wells Clinic
Ph : xxxx xxxx
အိမ်ထဲရောက်ရောက်ချင်း ဧည့်ခန်းမီးတွေကို ဖွင့်လိုက်တော့ အဝါရောင်လင်းလင်းတွေက ခန်းလုံးပြည့် ဖြည့်လိုက်တာကိုပင် သူမ သဘောကျနေမိပြန်သည်လေ.။
"ခုတလော ခငျဗြားကွညျ့ရတာ လနျးနသေလိုပဲဗြ"
"အငျး ကြှနျမကို ကြှနျမ ပွနျရလိုကျတယျထငျတာပဲ"
"ဘာကွောငျ့မှနျးတော့ မသိဘူး၊ တခုခုကို ရောကျသှားတာ၊ အဆုံးကိုလို့ ထငျတာပဲ"
"အဲဒီအဆုံးက ခငျဗြားသဘောကတြဲ့အဆုံး ဟုတျရဲ့လား"
"သဘောကခြွငျး မကခြွငျးတှေ ကြှနျမ သိပျစဉျးစားလေ့ မရှိတော့ဘူး
အပွငျဘကျက သဈပငျစိမျးတှဆေီ တခကျြလှမျးငေးရငျး ခပျလေးလေးဖွမေိသညျ။ တကယျတော့ သဈပငျပျေါက အရှကျစိမျးတှကေ တကယျ့အစိမျးတော့ မဟုတျဘူး၊ ဖုနျတကျနတေဲ့အစိမျးတှေ၊ မိုးရှာလိုကျရငျ ကောငျးမှာပဲ။
သူက ကားကို ဂရုစိုကျမောငျးရငျး ရှကွေ့ညျ့နလေကျြက ခေါငျးတညိတျညိတျ။
သူမက အပွငျကို ငေးလကျြက တှေးတှေးဆဆ ပွောပွနျသညျ။
"ကြှနျမလညျး သိပျတော့ မသိဘူး
ဘဝကွီးက မသိခွငျးတှပွေညျ့နှကျနတောဆိုတော့ ကြှနျမလညျး မသိခွငျးတှဆေီ ရောကျရောကျသှားတာ မြားတယျ
သူက ကြှနျမ နှဈသကျလရှေိ့တဲ့ ယောကျြားပုံစံတော့ မဟုတျဘူး"
"He is not my cup of tea ဆိုတာ ခငျဗြား ပွောဖူးတယျ ဒါပမေယျ့"
"ဟုတျပါတယျ၊ ကြှနျမ ကခြဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု အဲတာကို ကြှနျမ သံသယရှိနတော"
"အခဈြနဲ့ စှဲလနျးခွငျးဟာ မတူဘူးလေ၊ ခငျဗြား အခု နားလညျသှားပွီပေါ့"
"ဟုတျတယျ၊ ကြှနျမပွောခငျြတာ အဲတာ
တပွိုငျနကျထဲမှာပဲ အခဈြလို့ထငျခဲ့မိတာကို ကြှနျမ နှမြောနတော
အခြိနျတှအေကွာကွီး သခြောတယျထငျခဲ့တာလေ၊ တသကျမှာ လူတယောကျကိုတော့ ခဈြခဲ့ဖူးပွီ ထငျခဲ့တာ"
"ခငျဗြားကို သသေခြောခြာလလေ့ာပွီးမှ ခငျဗြားစိတျကို လကေ့ငျြ့ပေးပွီး သူလိုခငျြတဲ့ဆီ ရောကျအောငျသှားခဲ့တာမြိုး."
"ဟုတျတယျ ဟုတျတယျ၊ ကြှနျမပွောခငျြတာ အဲတာမြိုးလား မသိဘူး"
"ခငျဗြားကိုယျတိုငျက ခငျဗြားဘဝထဲ သူမရှိရငျ မဖွဈတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အထိ ခံစားခဲ့ရအောငျ ခငျဗြားစိတျထဲ အနကျကွီး ခြိနျပဈထညျ့ခဲ့တာ"
သူမစိတျတှေ ဝဝေါးသှားခဲ့ပွနျသညျ။ ဒါကွောငျ့လညျး သူမဒဏျရာနကျခဲ့တာ။
မီးပှိုငျ့မှာ ကားရပျခိုကျ ဘေးကကားတှကေို သူမငေးမိပွနျသညျ။ ဘာကားအမြိုးအစားပါလိမျ့၊ ကားအမြိုးအစားတှေ၊ တံဆိပျတှေ၊ နာမညျကွီးတှကေို သူမ မသိပါ။
"ယောကျြားတှကေ မိနျးမတှထေကျ ဂုဏျတှေ ပါဝါတှေ အသိုငျးအဝိုငျးတှေ ပိုကွညျ့တတျတယျနျော"
"ကြှနျမဘဝမှာလေ တခါမွ အမွငျ့ကိုရောကျခငျြစိတျနဲ့ မကွိုးစားခဲ့ဖူးဘူး"
"ခငျဗြား နောငျတနဲ့ နာကငျြနတောမြိုးတှေ ခံစားရတုနျးလား"
"အငျးဒါပမေယျ့ ရှငျသိလား၊ ကြှနျမမာနကွောငျ့ နာကငျြနရေတာ
တခွားမိနျးကလေးတှလေို ဟနျမဆောငျတတျခဲ့ဘူး၊ ကြှနျမဟာ ရဖို့ခကျတယျဆိုတာမြိုး ကြှနျမ နမေပွခဲ့ဘူး။ ပွီးတော့ သူ ထွကျသွားတဲ့အခါ သူ့နောကျက ပွေးလိုကျနခေဲ့မိတယျ၊ တခွားမိနျးကလေးတှလေို ကိုယျ့လမျးကို ပြျောအောငျ တယောကျထဲ ဆကျလြှောကျ မျပမိခဲ့ဘူး၊ နောငျတလို့ နာမညျတပျရမလား မသိဘူး။ အဲတာတှအေတှကျ ကြှနျမ နာကငျြနရေတာ"
"အဲတာ ခငျဗြားက ရိုးသားတာကိုး၊ ခငျဗြားလို အမြိုးသမီးမြိုး သူထပျတှမေ့ယျ ထငျနလေို့လား"
"မထငျပါဘူး၊ တခွားမိနျးကလေးတှကေ မာနရှိတယျ။ ကြှနျမက မာနမရှိခဲ့တာ"
"ရျောခကျပွီ၊ သူတှဖေူ့းတဲ့မိနျးကလေးလိုမြိုးတှကေ အမြားကွီးပါဗြ။ ခုခတျေမှာ ဘယျသူကမှ ကိုယျ့စိတျကို အနာခံပွီး၊ ကိုယျ့မာနကို ခပြွီး လူတယောကျကို ဘယျသူကမှ မခဈြတော့ဘူးဗြ.။ ခငျဗြားလို sincere သိပျဖွဈလှနျးတဲ့အမြိုးသမီး ရှားတယျလေ"
"ရှားတော့ ဘာဖွဈလဲ၊ ကြှနျမ တနျဘိုးအထားမခံခဲ့ရဘူးလေ။ ကြှနျမနာကငျြရတာ အဲတာကွောငျ့လညျးပါတယျ။ လှယျလှယျနဲ့ရရငျ လူတိုငျး တနျဘိုးမထားတတျကွဘူးတဲ့၊ အဲလို သူပွောခဲ့တာ"
မဟုတျတာ၊ လူတိုငျးဆိုတာတော့ မမှနျဘူးဗျ။ လှယျတာခကျတာအပျေါ တနျဘိုးထားမှုဆိုတာတှကေ လူတဦးခငျြးစီနဲ့သာ ဆိုငျတာတှပေါဗြာ
ခငျဗြား ကိုယျ့ကိုယျကို အဲလောကျ မနှိပျစကျသငျ့ဘူး"
"တခါတလေတော့ သူ ကြှနျမကို သံယောဇဉျမြား ရှိသေးလား ထငျမိပွနျတယျ။ အဲဒီအခါမြိုးတှမှော ကြှနျမ သိပျငိုခငျြတာပဲ"
"ကြှနျတျောပွောမယျ။ အဲ့လူဟာ Trophy collector လို လူမြိုးပဲ။ သူ့ဝါသနာအရ Trophyတှကေို လိုကျစုဆောငျးမယျ၊ ရလာသမျှ ဘီရိုထဲ ထညျ့သိမျးထားမယျ။ ဒါဟာ သူ့အောငျမွငျမှု၊ သူ့ဂုဏျသိက်ခာပဲ။ ဒါတှကေို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့မိတိုငျး သူ့မှာ energyအသဈတှရေနမေယျ၊ ဒီလောကျပဲ။
ရပွီးတဲ့ Trophyတှကေို ဘီရိုထဲပဈထားပွီး မရသေးတဲ့ Trophyအသဈတှကေို စိတျဝငျတစား လိုကျစုဆောငျးမယျ။ တခါတလတေော့လညျး ရပွီးသှားတဲ့ Trophyတှေ ဖုနျတကျတဲ့အခါ ဘီရိုထဲကထုတျ၊ ဖုနျလေးဘာလေးပွနျသုတျရငျး အဲ့ Trophyနဲ့ ဆကျစပျခဲ့သမြှမှတျဉာဏျတှကေို ပွနျစဉျးစားခငျြ စဉျးစားလိမျ့မယျ။ အဲတာကလညျး သူ့သာယာမှုအတှကျပဲဗြ။ ရပွီးသားTrophyအဟောငျးတခုအပျေါမှာ သူ့စိတျဝငျစားမှုက အဲသလောကျပဲ၊ အဲတာကို သံယောဇဉျလို့ ခငျဗြား ဘာသာပွနျ မလှဲမိစနေဲ့"
"ယောကျြားတှေ ရှငျ့လို စိတျထားရှိရငျ ကောငျးမှာ"
"အမြိုးသမီးတှလေညျး ခငျဗြားလိုဆိုရငျ ကောငျးမှာ"
သူမတို့နှဈယောကျလုံး သဘောတကျ ရယျမိကွရသညျ။ ပခုံးပျေါတငျထားတဲ့ ကမ်ဘာကွီးက ခဏတော့ ပေါ့ပါးသှားသလို.။
"ဆေးတှလေညျး မှနျမှနျသောကျဖို့ မမနေဲ့ဗြ နျော၊ နောကျလ ဆေးခနျးရကျခြိနျးမှာ ပွနျတှတေ့ာပေါ့ဗြာ၊ ဒီကွားထဲ ခငျဗြားစိတျထဲ ထူးထူးခွားခွားဖွဈစဉျတခုခု ရှိခဲ့ရငျ ကြှနျတေျာ့ဆီ ဖုနျးဆကျဖို့ အားမနာပါနဲ့"
သူ့ကားထဲမှ မထှကျခငျ ဒကျရျှဘုတျပျေါရှိ သူ့လိပျစာကဒျက သူမမကျြလုံးထဲ ဖျတ်ကနဲ ဝငျရောကျနရောယူလသေညျ။ အဲတာမြိုးတကတျ သူမပိုကျဆံအိတျထဲ ရှိနတောကိုပါ တဆကျထဲသတိရကာ ပွုံးမိသေးသညျ။
အိမျထဲရောကျရောကျခငျြး ဧညျ့ခနျးမီးတှကေို ဖှငျ့လိုကျတော့ အဝါရောငျလငျးလငျးတှကေ ခနျးလုံးပွညျ့ ဖွညျ့လိုကျတာကိုပငျ သူမ သဘောကနြမေိပွနျသညျလေ.။